Ukubanjwa komhlaba noma ukubanjwa komhlaba yizikhulu
Izwekazi lase-Afrika, okuwukuphela kwalo elinenxenye yesine yomhlaba ovundile womhlaba, liphethe ama-41% wemisebenzi yomhlaba, inani eliphelele lokuthengiselana kwe1 515 emhlabeni jikelele, ngokusho kombiko wakamuva we-NGO ActionAid International, owabuya emuva kwangathi i-2014. Kusukela ngonyaka we-2000, sekubhaliwe okuningi okwenziwe ngama-1 600, okuyindawo ephelele yamahektha ayizigidi ze-60, kusho i-NGO ukuthi kungenzeka nokuthi ukutholwa okuningi Isilinganiso esiphakathi noma esikhulu sisale kuze kube manje asibhalwe phansi futhi asichazanga. Lo mbiko wamakhasi angamashumi amabili, obhalwe ngesihloko emhlabeni: indlela umhlaba ovula ngayo indlela yokubanjwa komhlaba yizinkampani, usembulela ubukhulu bale nto engasabisi ukusinda kwezigidi kuphela zabantu emhlabeni wonke, kepha futhi ezisengozini yemvelo, amahlathi nezinhlobo zezilwane.
I-NGO inesifiso esikhulu e-Afrika, ngoba leli lizwekazi selibe yinto entsha yokuheha abantu abaningi, imali yempesheni kanye namaqembu amakhulu okudla abathole, ngokubumbana kohulumeni basekhaya, izigidi zamadola. amahektha omhlaba olimekayo.
Amazwe aseqalile nokuthenga umhlaba ovundile ukuze ahlangabezane nezidingo zawo zokudla futhi akhiqize ama-biofuel. ISaudi Arabia, Qatar, India kuvame ukucashunwa kuyo imibiko yale ma-NGOs eye yakhomba namandla amakhulu, njenge-United States, amanye amazwe angamalungu e-European Union (France, Germany, Great Britain) , Netherlands), futhi eminyakeni yamuva nje, iChina ifuna ukuba nengxenye yayo e-Afrika ukufeza izidingo zasendaweni. E-sub-Saharan Africa, isifunda esinokuphazamiseka okuphezulu kwezombusazwe nakwezokuphepha, ukuthathwa komhlaba omi ovundile owenziwe yiziphathimandla, ezihlwaye izinkulungwane zabalimi umthombo wabo oyinhloko wokusinda.